May 15, 2019 - MM Live News
မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ ဆောက်လုပ်မှု ကန့်ကွက်နေသော ဒေသခံတွေကို သေနတ်များဖြင့် ရုန့်ရင်းဆန်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်….
မန္တလေးတိုင်း၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ အောင်သပြေရွာမှာ ရှိတဲ့ ကျောက်မီးသွေးသုံး ဘိလပ်မြေ စက်ရုံ ဆောက်လုပ်မှုကို ဒေသခံတွေက ကန့်ကွက်နေပါတယ်။ ဒီလိုကန့်ကွက်မှုတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့ က အင်အားသုံးဖြေရှင်း ခဲ့တာကြောင့် ရုန့်ရင်းဆန်ခတ်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာ အဲဒီ ဖြိုခွင်းမှု ကို သတင်းရယူနေတဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်လည်း ဖမ်းဆီး ခံထားရပါတယ်။ #ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #မန္တလေး #ကျောက်မီးသွေး #ဘီလပ်မြေ #စက်ရုံ See less unicode မန်တလေးတိုငျး၊ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ၊ အောငျသပွရှောမှာ ရှိတဲ့ ကြောကျမီးသှေးသုံး ဘိလပျမွေ စကျရုံ ဆောကျလုပျမှုကို ဒသေခံတှကေ ကနျ့ကှကျနပေါတယျ။ ဒီလိုကနျ့ကှကျမှုတှကေို ရဲတပျဖှဲ့ က အငျအားသုံးဖွရှေငျး ခဲ့တာကွောငျ့ ရုနျ့ရငျးဆနျခတျမှုတှေ ဖွဈပျေါ […]
ကြက်​​ခြေခတ်ခံထားရတဲ့ တမာပင်တန်း သူ့တစ်ယောက်တည်း ကာကွယ်နိုင်ပါ့မလား သစ်​ပင်​​တွေကိုချစ်​ပါ ဒီ​နေ့မနက်​က ပခုက္ကူ ကမီန်းလမ်းမကြီးဖြစ်​တဲ့​ပေါက်​လမ်း​ဘေးက တမာပင်​​တွေခုတ်​ဖို့ ကြက်​​ခြေခက်​ ပုံ​တွေတက်​လာတယ်​ အာ့နဲ့ ရှယ်​လိုက်​တယ်​ ဒီနှစ်​လို အညာဘက်​အပူချိန်​​တွေစံချိန်​တင်​​လောက်​​အောင်​ပူပြင်း​နေတာ​တောင်​ ထပ်​ခုတ်​အုံးကြအုံးမယ်​ဆို​တော့ စဉ်းစားရင်း ရင်​ထဲနင့်​လာတယ် ညီမ​လေးတ​ယောက်​ကလာ​မေးတယ်​ အကို​ အဲဒီကဘယ်​​နေရာမှာလဲ ဘာလို့ခုတ်​ကြမှာလဲဆိုပီး လာ​မေးတယ်​ ကိုလည်း ကိုသိသ​လောက်​​ပေါ့ ​ပြောပြဖြစ်​လိုက်​တယ်​ လမ်းချဲ့ဖို့အတွက်​ ခုတ်​မှာ​ပေါ့​လေလို့ ​နောက်​ပီး ဒီလမ်းမကြီးထဲမှာ အရင်​က အထက ၂ နားတဝိုက်​ခုတ်​ကြ​တော့ ဆိုင်​ကယ်​စီးသွားရင်​ကို အ​ပေါ်ကပူ ​အောက်​က ကတ္တရာကအပူဟပ်​ နဲ့ ဘယ်​လိုမှ သွားလာတဲ့သူ​တွေအဆင်​မ​ပြေဘူး​ပေါ့​လေ မခုတ်​ခင်​တုန်းက အာ့​နေရာ​တွေက လမ်းသွားလမ်းလာ ဆိုင်​ကပ်​ခဏရပ်​ နားနား​နေ​နေ ​နေလို့သိပ်​​ကောင်းတာရယ်​လို့ ​နောက်​ပီး ဒီလမ်းကမှာ သစ်​ပင်​​တွေနဲ့အရိပ်​ရတာဆိုလို့ ဒီနား​လောက်​ပဲ ရှိ​တော့တာပါ ည​နေ​ရောက်​​တော့ လာ​မေးတဲ့ညီမ​လေးက […]
#မြန်မာကိုမထိနဲ့ စကာင်္ပူသူဋ္ဌေးကို အံ့သြမှင်သက်စေခဲ့သော မအူပင်မြို့ နယ် ထန်းပင်ကွေ့က ကရင်မလေး ဖွေးစိန် သမုဒ္ဒရာ ဝမ်းတစ်ထွာ မိသားစုအရေး ဘဝရှေ့ရေးအတွက် သူများနိုင်ငံ လာအလုပ်လုပ်တာလေ ကျွန်လာခံတာမှ မဟုတ်တာ အဖိနှိမ့်ခံ အပြောအဆိုခံဖို့မှ မဟုတ်တာ …သူတို့ပေးတဲ့ လစာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားကို ပေးခဲ့တာပဲ အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားပဲ….. လူလူချင်းအပေါ် ငါလစာပေးထားရတယ် ပက်ဆံပေးရတယ်ဆိုပြီး သူတို့ပြောသမျှ ဆိုသမျှ ခေါင်းငုံ့ခံကာ နေတတ်တဲ့သူတွေထဲ ဖွေးစိန် တစ်ယောက်မပါပေါင်။ လစာနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားကို အပြည့်ပေးဆပ်ခဲ့တာ သူတို့ပြောသမျှ ဆိုသမျှ ခံနေရမှာတဲ့လား တန်းတူညီမျှမှု ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မရှိစေရဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာ လူသားတိုင်း ခံစားခွင့် ရှိနေတယ်မဟုတ်လား။ မိသားစုအရေးကြောင့် စကာင်္ပူကို စွန့်စားပြီး ထွက်ခွါ လာခဲ့ရတာ စင်္ကာပူသွားရင် ဒါတွေ […]
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာမြို့နယ်တွင် သမီးရင်းကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သဖြင့် ထောင်ကျခဲ့ဖူးသည့် ဖခင်မှ ထောင်မှ လွတ်လာပြီးနောက် အဆိုပါ သမီးကို ထပ်မံအဓမ္မပြုကျင့်သည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။ မေလ ၈ ရက် ည ၁၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကျောက်ထုံးကြီး ကျေးရွာရဲကင်းစခန်းသို့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက သူမ၏ ဖခင်ရင်းက အဓမ္မအကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း လာရောက်တိုင်ကြားခဲ့သည့် အ တွက် စစ်ဆေးရာမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောက်ထုံးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဆွယ်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် ဦးတင်ထွန်း ၄၅ နှစ်သည် ဧပြီလ ၁၈ ရက် ညအချိန်တွင် အတူနေ သမီးနှစ်ယောက်၏ အိပ်ယာအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ကာ သမီးငယ်၏ရှေ့တွင် သမီးကြီး ကို အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီး […]
မီး ခဏခဏပျက်တဲ့လမှ မီတာခ ဘာ့ကြောင့် ပိုများနေတာလဲ တောင်ငူမြို့ လျှပ်စစ်ဋ္ဌာန နှင့် လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး I လျှပ်စစ်တာဝန်ယူထားသည့် ကုမ္မဏီ I ( အားလုးံ) ဘာတွေလဲ လို့ပဲ မေးရတော့မည် လော့ ။ လျှပ်စစ်မီး ပျက်သည် ခဏ ခဏ ပျက်သည့် သို့သော် ပြည်သူတွေဘက်က အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့်ဟု နားလည် ပေးခဲ့ကြသည်။ တောင်ငူ လျှပ်စစ် ဋ္ဌာန နှင့် ရွှေစွမ်းအင် ကုမ္မဏီ ကို မေးချင်တာက လျှပ်စစ်မီး အပျက်များသည့် လ မှ မီတာခ ဘာကြောင့် များနေရတာလည်း မီတာခ ကောက်ခံဖို့အတွက် တိုင်ပေါ် မှာ ရှိတဲ့ မီတာတွေကို တိုင်းတာသည့်အခါ ဘယ်လိုတိုင်းတာလဲ […]
ဒီညောင်ပင်ကြီးက တော်တော်လေး ထူးဆန်းတယ်။ ကဆုန်လ ရောက်ပြီဆိုရင် ရွက်နုဝေပြီး ညောင်ကန်တော့ ထိုးတယ်။ မနေ့က ညနေ မိုးရွာပြီးစမှာ ဖလပ် ဖလပ်နဲ့ အသံတွေ ကြားလို့ လမ်းသွားလမ်းလာနဲ့ အနီးအနားအိမ်တွေက ထွက်ကြည့်တော့ ညောင်ရွက်ကလေးတွေ ကန်တော့ထိုးနေတာ။ အရွက်ကလေးတွေ ထပ်ပြီး ကန်တော့ထိုးနေတဲ့ပုံက လူတွေ တမင်တကာ ယူလိပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ တခြားညောင်ပင်တွေ လည်း ဒီဒေသမှာ အများကြီးရှိကြပေမယ့် ဒီဗောဓိ ညောင်ပင်လိုမျိုး ကန်တော့ မထိုးကြဘူး။ ထူးဆန်းလို့ တင်ပေးတာပါ။ ပဲခူးတိုင်း (အနောက်ခြမ်း ) သာယာဝတီခရိုင် မိုးညိုမြို့နယ် ရေကင်းတာရိုးဦးက ဗောဓိညောင်ပင်ကြီးပါရှင့်…။ Credit -ပေးပါတယ် unicode ဒီညောငျပငျကွီးက တျောတျောလေး ထူးဆနျးတယျ။ ကဆုနျလ ရောကျပွီဆိုရငျ ရှကျနုဝပွေီး ညောငျကနျတော့ ထိုးတယျ။ မနကေ့ […]
အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်းစားလို့ရတဲ့ မြေကြီးခဲလေးတွေလာရောင်းတဲ့ အဘွား…..
အောင်ပန်းဈေးနေ့တိုင်း မြေကြီးခဲ လာရောင်းတဲ့ မို့အို။ စားလို့ရတဲ့မြေခဲလေးတွေပါ။မြေခဲတိုင်းစားလို့မရပါဘူး။ ပအိုဝ်းလူမျိုးအ​ခေါ်အ​ဝေါ်က*ဟမ်းတော့*လို့​ခေါ်တယ်​….. ​မြေကြီး​တော့ ဟုတ်​တယ်​….ရိုးရိုး​​မြေကြီး​တော့ မဟုတ်​ပါဖူး…. လွယ်​လွယ်​နဲ့ ရှာလို့မရပါဘူး….ဒီစားလို့​​ရတဲ့​​မြေကြီး​တွေက ​​​နေရာသက်​သက်​ရှိပါတယ်​….. များ​သောအားဖြင့်​ အဖိုးအဖွား​တွေကြိုက်​ကြတယ်​… အစာ​ပြေ​ပေါ့ ထမင်းစားပြီးရင်​ စားကြတာ များတယ်​ ….. တချို့ကြ စားတာစွဲသွားရင်​ မစားဘဲမ​နေနိုင်​​ဖြစ်​သွားပါတယ်​…. နို့ဆီဘူးတဘူးငါးရာပါ အရသာက စိမ့်ပါတယ် ထုံးဓါတ် အနဲငယ်ပါပါတယ် အနဲငယ်စပ်ပါတယ်….. ရှမ်းလို လိန်ဟွမ်းလို့ခေါ်တယ် ဗမာလို မြေကြီးမွေးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ် …… ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆို ဗအို့လူမျိုးတွေ အစားများတယ်……။ဘကြီးစိုး unicode အောငျပနျးစြေးနတေို့ငျး မွကွေီးခဲ လာရောငျးတဲ့ မို့အို။ စားလို့ရတဲ့မွခေဲလေးတှပေါ။မွခေဲတိုငျးစားလို့မရပါဘူး။ ပအိုဝျးလူမြိုးအ​ချေါအ​ဝျေါက*ဟမျးတော့*လို့​ချေါတယျ​….. ​မွကွေီး​တော့ ဟုတျ​တယျ​….ရိုးရိုး​​မွကွေီး​တော့ မဟုတျ​ပါဖူး…. လှယျ​လှယျ​နဲ့ ရှာလို့မရပါဘူး….ဒီစားလို့​​ရတဲ့​​မွကွေီး​တှကေ ​​​နရောသကျ​သကျ​ရှိပါတယျ​….. မြား​သောအားဖွငျ့​ အဖိုးအဖှား​တှကွေိုကျ​ကွတယျ​… အစာ​ပွေ​ပေါ့ ထမငျးစားပွီးရငျ​ စားကွတာ […]
United Construction နှင့် ရန်ကုန်စည်ပင်(ယာ/အုံ)/ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်စည်ပင်တို့ ပူးပေါင်းလာဒ်စားပြီး ပြည်သူများအားဒုက္ခရောက်စေရန် အသက်အန္တရာယ်ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်နေမှု ခုမြင်ရတာကျနော့ အသက်၇၀ကျော်၈၀ကျော်မိဘတွေနေထိုင်တဲ့ ၁၅၀သိမ်ဖြူလမ်း မြေညီထပ်တိုက်ခန်းပါ ဘေးကပ်လျက်တိုက်ကို United Construction က ၁၂ထပ်တိုက်ဆောက်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကစလုပ်ပါတယ် အဲဒီကုမ္ပဏီက ဘိုးပိုင်တွေကို ၁’ ပိုင်တွေအချောင်း ၄၀ကျော်ရိုက်ပါတယ် ဒါကို ရန်ကုန်စည်ပင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ရိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ပေ ၅၀x ပေ၆၀ ပတ်လည် အကွက်ထဲမှာ ရိုက်တာပါ ဒီတော့ ကပ်လျက် ကျနော့မိဘတွေနေတဲ့ ၈ခန်းတွဲ ၂ထပ်တိုက်ကလေးဟာ အက်ကွဲကြောင်းတွေ လိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျနော့မိဘတွေရဲ့ အခန်းက သူတို့ဆောက်မယ့်နေရာနဲ့ ကပ်လျက်အခန်းပါ ဒါကို မြို့တော်စည်ပင် ယာ/အုံဌာနကိုတိုင်ကြားတော့ လုပ်ငန်းတွေ ခေတ္တ ရပ်ခိုင်းပြီး ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်အပိုင်းကို ဖျက်ချ ပြန်ဆောက်ပေးဖိုိ့ ကုမ္ပဏီက မြေရှင်/အခန်းရှင်တွေကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ် (တိုင်ကြားရာမှာလဲ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ထံတိုင်ကြားမှ […]
ရဲတပ်ဖွဲ့ပစ်ခတ်မှုကို live လွှင့်သတင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ သတင်းထောက်ဖမ်းဆီးခံရ Channel Mandalay TV သတင်းထောက်နန္ဓ တစ်ကိုယ်တော်ကို ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ရွာသားများက ပြောပါတယ်။ အောင်သပြေကျေးရွာတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပစ်ခတ်နေမှုများအား Live ရိုက်ကူးတင်ဆက်နေခြင်းကို သတင်းထောက်ကဒ်ထုတ်ပြသော်လည်း ကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်ကာ ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိပါသည်။ သတင်းထောက်ဖုန်းကို ဆက်သွယ်သော်အခါတွင်လည်း ဆက်ပိတ်ထားသည့် အနေအထားဖြစ်နေသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းပေမယ့် ဆက်သွယ်မရပါ။ Channel Mandalay TV Video Credit – Channel Mandalay TV
နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဘိုးတော်နဲ့ မော်ဒယ်ဗွီဒီယိုဖိုင် ပျံ့နှံ့မှု May 15,2019 အဖိုး မဟာမုနိ လို့နံမည်ကြီးခဲ့တဲ့ထိုင်း ဘိုးတော် လူထွက်တစ်ဦးကို အွန်လိုင်း ကနေ မော်ဒယ်တစ်ဦးနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုးဆွ ရုပ်သံကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ကာ …. အွန်လိုင်းဂိန်းကစားကြဘို့ကျော်ငြာ ထုတ်ခဲ့လို့ဒီကနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဘိုးတော်လူထွက်နဲ့မော်ဒယ်အမျိုးသမီးကို ဖမ်းဆီး လိုက်ပြီး အမှုနှစ်ခုနဲ့တရားစွဲလိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ခုလို အွန်လိုင်းဆိုင်ရာ ထိမ်းချုပ်မှု ဥပဒေအရ ခုလိုအမှုကို ထောင်ဒဏ် (၅) နှစ်အထိ အပြစ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ […]